Awoodaha ciidamada Soomaaliya iyo Kenya ma isu dhigmaan? - Banaadisom
Home Wararka Maanta Awoodaha ciidamada Soomaaliya iyo Kenya ma isu dhigmaan?
Soomaaliya iyo Kenya ayaa awood ahaan dhinaca tirada ciidamada milatariga isku dhow, inkastoo qalabka kale ay aad ugu kala duwan yihiin, shacab ahaan ay kala badan yihiin labada dal ee dariska ah.
Milatariga Kenya, oo magacooda loo soo gaabiyo KDF (Ciidanka Difaaca Kenya) waxay toos u dhisnaayeen tan iyo markii uu waddankan ku yaalla bariga Afrika xornimadiisa qaatay sanadkii 1963-kii.
Soomaaliya ayaase sannadihii dambe ku dadaaleysa dib u dhiska ciidamada qaranka, oo qeybo kala duwan leh, kaddib markii ay ku dumeen burburkii dowladdii dhexe ee 1991-kii meesha ka baxday.
XIGASHADA SAWIRKA,TONY KARUMBA VISA GETTY IMAGES
XIGASHADA SAWIRKA,STATE HOUSE KENYA
Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya
XIGASHADA SAWIRKA,TINA SMOLE VIA GETTY IMAGES
Milatariga Kenya, oo qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa Soomaaliya ku sugan tan iyo sanadkii 2011-kii, halkaasoo ay ka fuliyaan howlo ay ka mid tahay la dagaallanka ururka Al-Shabaab.
Tallaabadaas ayey Kenya qaadday kaddib markii weerarro ka dhacay gudaha dalkeeda ay mas’uuliyaddooda sheegteen Al-Shabaab oo xilligaas dhaqdhaqaaqyo xooggan ka waday gudaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka geeska Afrika.
Waxay ciidanka Kenya howlgalka midowga Afrika ku wehliyaan kuwa dalalka kale ee ay ku jiraan Uganda iyo Burundi.
Ujeeddada ay Soomaaliya u joogaan ayaa ah in ay amniga dhowraan inta laga helayo ciidamo Soomaali ah oo si buuxda ula wareega mas’uuliyaddaas.
Dowladda Soomaaliya oo dhankeeda u xusul duubeysa inay dib u dhisto ciidankii qaranka ayaa ku guuleysatay in ay tababarro u sameyo kumannaan askari iyadoo kaashaneysa waddamo uu ka mid yahay Turkiga.
Ciidamada sida weyn loo hadal hayo ee sannadihii dambe Soomaaliya u dhismay waxaa ka mid ah Haramcad iyo Danab.
Qoraalka sawirka,Ciidanka Haramcad ee Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii 2013-kii bilowday tababarka ciidamada Danab, waxaana xilligaas lagu bilaabay hurin 105 askari ahayd.
Sida saraakiil dowladda ka tirsan laga soo xigtay, ujeeddada loo sameeyay ciidanka ee xilligaas waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoos ah, waxaana lagu asaasay saldhigga ciidamada cirka ee Belidogle ee degmada Wanlwaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Kumaandooska Danab waxaa saldhigga Balidogle ku tababara ciidamada Mareykanka ee ku sugan goobtaas, kana tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Africa.
Sidoo kale saraakiisha kumandoosta Danab, gaar ahaan kuwa hogaamiya dagaalka ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay, halkaas oo ay ku soo qaataan tababarro dheeraad ah oo la xiriira hoggaaminta ciidanka xilliyada dagaalka.
Previous articleMuuse Biixi oo si weyn loogu soo dhoweeyey Hargeysa ka dib booqashadii Kenya (Daawo Sawirada)
Next articleDhacdo aad u murugo badan oo kadhacday magaalada Muqdisho kadib markii Gabar
DEG DEG Ciidamada Mareykanka oo gebi ahaan laga Saaray Somalia iyo al shabaab oo bilowday in